Madaxweyne Farmaajo oo jeediyay khudbad dhinacyo kala duwan taabaneysay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo oo jeediyay khudbad dhinacyo kala duwan taabaneysay
Madaxweyne Farmaajo oo jeediyay khudbad dhinacyo kala duwan taabaneysay
Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa jeediyay khudbad ku aaddan xaaladda guud ee dalka iyo midda doorashooyinka, isagoona Madaxda Dowlad Goboleedyada ku adkeeyay hirgelinta jadwalka doorasho, ee ay isla qaateen.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ka warbixiyay guulaha la taaban karo ee laga xaqiijiyay dib-u-dhiska Ciidamada Qalabka Sida ayaa ku bogaadiyay, sida naf-hurnimada leh ee ay u difaacayaan dalka iyo halgankooda ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah ee caadeystay daadinta dhiigga iyo burburinta hantida shacabka Soomaaliyeed.
“Dadaaladeena iyo qorsheyaasha hirgalay ee dib-u-dhiska Ciidamada Qalabka Sida waxay horseedeen in maanta Ciidankeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga guud ee Dalka, uuna gabo-gabo marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen Ciidamada AMISOM amniga guud ee d alka.”
Madaxweynaha ayaa ka waramayay hannaanka siyaasadda arrimaha dibadda dalka oo ku dhisan wax wada-qabsi iyo is-ixtiraamka dalalka Caalamka, ilaalinta sharafka iyo madaxbannaanida dalka.
“Siyaasadeena arrimaha dibadda ee ku dhisan gobannimada waxa ay horseedday in aan si mug leh uga dhex muuqano fagaareyaasha caalamka, sida xubinimada Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobey, oo aan ku guuleysannay markii labaad in aan Madaxweyne Kuxigeen ka noqonay Golaha Guud ee Qaramada Midoobey, haatana u sharraxanahay Goleyaasha Ammaanka ee Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobey.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku boorriyey shacabka Soomaaliyeed midnimada iyo wadajirku oo fure u ah jiritaanka iyo awooddeenna qarannimo, waxa uuna xusay doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku aaddan midnimada, dowladnimada iyo difaaca dalka.
Previous articleMadaxweynaha oo caawa khudbad u jeedinaya shacabka Soomaaliyeed
Next articleQoorqoor oo isbitaalka ku booqday Xildhibaan Xasan Xersi Faafaale